Maamulka Puntland oo shuruudo aad adag ku xiray ka qayb galka shirka Muqdisho | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Maamulka Puntland oo shuruudo aad adag ku xiray ka qayb galka shirka...
Maamulka Puntland oo shuruudo aad adag ku xiray ka qayb galka shirka Muqdisho
Maamulka Puntland ayaa soo saaray qoraal ka kooban Saddex bog, oo loga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, doorashooyinka lagu muransan yahay iyo shuruudo cusub oo ay ku xirtay ka qayb ahaanshaha doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo shirka wadatashiga.
Puntland ayaa sheegtay in waligeed ay qayb ka ahayd howlaha geedi-socodka doorashooyinka Soomaaliya welina diyaar u tahay sidoo kalena ay diyaar u yihin in la dhaqangeliyo hehsiiskii 17-kii bishii Sagaalaad ee sanadkii hore lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Puntland ayaa qoraalkooda waxaay kusoo bandhigeen shuruudo u muuqday kuwo adag, kuwaasoo ay macquul tahay in dowladda Federaalka Soomaaliya aysan fulin doonin waxayna shurudahaas oo gaaraya ila 8 qoodb ay kala yihiin.
1: in Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, uu soo saaro wareegto xadideysa awoodaha fulineed ee Madaxweynaha iyo kuwa sharci-dajineed ee Baarlamaanka Federaalka Soomaliya, Sidoo kale waa in meesha laga saaro dhammaan go’aamadii masiiriga ah ee Madaxweynuhu saxiixay intii ka dambaysay 8-dii bishaan iyo shuruucdii ay Baarlamaanku ansixiyeen muddadii ka dambaysay 27-kii bishii Laba iyo tobnaad ee sanadkii hore, Si waafaqsan qoddobada 91-aad iyo 60-aad ee Dastuurka KMG ee Soomaaliya.
2: Maadaama Ciidanka Amniga Qaranku ay ka qayb qaateen falalkii qalalaasaha watay ee Muqdisho ka dhacay 19-kii bishaan, waa in xilka laga qaado taliyeyaasha Ciidamada Milatariga, Booliiska iyo Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Qaranka ee NISA, lana magacaabo masuuliyiin lagu kalsoonaan karo laguna soo xulay hab wada-tashi ah, si loo hubiyo hufnaanta iyo dhex-dhexaad-nimada doorashooyinka, waa in Ciidanka Qaranku ku ekaadaan keliya waajibaadkooda ah sugidDa amniga lagana dhex saaro howlaha siyaasadda iyo doorashada, si loo soo celiyo kalsoonidii dhaawacantay.
3: In la dhiso guddi xaqiiqo raadin ah, oo baaritaan madax-banaan ku sameeya dhacdooyinkii qalalaasaha watay ee ka dhacay Mugdisho 19-kii bishaan, si la iskula xisaabtamo.
4: Madaama, Dowladda Federaalku ay ku guul-darraysatay fulinta heshiisyadii horay loo gaaray, waa in saaxiibada Beesha caalamka ee Soomaaliya ay qaataan door damaanad-qaad ah, si loo hubiyo fulinta qoddobada lagu heshiiyo ee Doorashooyinka.
5: Waxaa muhiim ah in Golaha Wada-tashiga Qaranku ay yeeshaan hab wadashaqayn joogto ah oo wakhtiyeysan si loo dardargaliyo qabsoomida doorashooyinka Dalka Soomaaliya.
6: Waa in Saamilayda siyaasadda iyo Ururrada Bulshada laga qaybgeliyo loona ogalaado inay ka qayb qaataan xal-u-helidda arrimaha ka taagan doorashooyinka, si loo xoojiyo kalsoonida iyo daahfurnaanta doorashooyinka.
7: In la dhowro xuquugaha aasaasiga ah ee Dastuurku siinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed sida xuquuqda hadalka, bannaanbaxyada, Kulamada IWM, si looga fogaado xasilloni-darro siyaasadeed iyo qalalaaso.
Shuruudahaay ay soo bandhigeen Maamulka Puntland ayaa weli ka jawaabin dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana shuruudahaan ay noqonayaan caqabado kale oo soo wajahay doorashooyinka Soomaaliya ee wali lagu Muransanyahay.
Previous articleDHAGEYSO:Dhakhaatiirta daawooyinka ka bixiyo isbitaallada oo shaqo joojin soo afjaray
Next articleDHAGEYSO:Mas’uuliyiin dowladda ka tirsan oo ku baaqay in loo gurmado shacabka ku nool deegaanka Yaaqbari weyne